အော်..ဒီအချစ်လေ♥♥♥ | PoemsCorner
အထီးကျန်ဆန်ခြင်းဆိုတဲ့ စိတ်တွေက တခါတရံမှာတော့ အလွမ်းဆိုတဲ့စိတ်တွေကို ပိုစေခဲ့မယ်ထင်ပါရဲ့…အရာအားလုံး မေ့ပျောက်သွားနိုင်ဘို့အတွက် ဘ၀ဆိုတဲ့ လောကဓံရိုင်းတွေထဲမှာ မောပန်းစွာနဲ့ တိုက်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း အလွမ်းဆိုတဲ့ မသိစိတ်လေးရဲ့ နောက်ကွယ်က ကြိုးတစ်ချောင်းကတော့ အရာအားလုံးကို ရပ်တန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အနာဂါတ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ရာ ဦးတည်ချက်မဲ့တစ်ခုရယ်ပါ..။ အချစ်ဆိုတဲ့အရာကလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ…ဘ၀မှာ အချိန်ကာလလေးတစ်ခုသာသာ လောက်တော့ အချစ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့သူတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေအမျိုးမျိုးကြားမှာ ချစ်တဲ့သူတိုင်းကလည်း အပြုံးပန်းအလှတွေဝေလို့…ချစ်နေကြဆဲပေါ့… အချို့ကလည်း ချစ်တဲ့သူတွေဟာ တစ်နေရာစီ ကွာဝေး နေခဲ့ကြရတယ်…။ ယုံကြည်ချက်တွေ…သစ္စာတွေ…မေတ္တာတရားတွေ…သံယောဇဉ်တွေနဲ့အတူ…အလွမ်းတွေကို ထွေးပိုက်ခဲ့ကြ သူတွေလည်း အများကြီးပေါ့….
အချို့ကလည်း ချစ်ခြင်းတွေနဲ့အပြိုင်…ခိုင်မာတဲ့လက်နှစ်စုံကို တွဲလို့ ဘ၀ရဲ့ ခရီးကြမ်း…ခရီးချောတွေကို နှစ်ယောက်အတူ ရင်ဆိုင် ကြလို့ လောကကြီးကို အံတုနေကြရသည်ပေါ့…. ဘ၀တွေနဲ့ အချစ်တွေက တခြားစီဆိုပေမယ့်လည်း ဘ၀တစ်ခုအတွက် အချစ် မရှိရင် မဖြစ်နိုင်သလို…အချစ်တစ်ခုအတွက်လည်း ဘ၀ဆိုတာ လိုအပ်နေပါလိမ့်မယ်။ လူသားတွေအားလုံးရဲ့ စိတ်တစ်ခုမှာ သိစိတ်တွေ၊ မသိစိတ်တွေနဲ့အတူ ရောယှက်ဒွန်တွဲနေခဲ့ကြတယ်လေ…။
သိစိတ်တွေထဲမှာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို တွန်းလှန်နေခဲ့ကြပေမယ့်…မသိစိတ်ရဲ့နောက်ကွယ်တွေမှာတော့ အချစ်က..အလွမ်းတွေနဲ့ တထပ်ထပ်နဲ့ပေါ့.. ကောင်းကင်ပေါ်မှာ..တိမ်တွေက ပြေးလွှားနေသလိုပါပဲ…စိတ်တွေကလည်း မရပ်မနား တရစပ် ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်သွားနေကြတယ်… အဖမ်းရခက်ပါတယ်လေ…ထို မသိစိတ်တွေကို…တစ်ထောင့်ငါးရာဆိုတဲ့ ဥပဒေနဲ့ အကျဉ်းချထား ခံရတဲ့ အခါ..အလွမ်းတွေကလည်း ကျဲပြန့်လို့နေတော့တာပေါ့။
တစ်ထောင့်ငါးရာရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး…ငါးရာနှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆိုတဲ့ အချစ်တွေကလည်း သိစိတ်တွေ၊ မသိစိတ်တွေကြားမှာ ရောယှက် လို့နေပါတယ်..။ နှစ်ထောင့်နဲ့နှစ်ဆယ့်ရှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ အရာရာဟာ နွေးထွေးစေတယ်လို့ ခံစားရပေမယ့်လည်း..ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးတဲ့ နှလုံးသားကတော့..ရောက်ယက်ခတ်နေပြန်တယ်လေ…။
သေသေချာချာတွေးပြန်တော့…အလွမ်းဆိုတဲ့ အဖြေသာရခဲ့တာပေါ့… မကုန်ဆုံးနိုင်ခဲ့သော အလွမ်းတွေက..တခါတရံ ဒီရင်ကို နှိပ်စက်လွန်းလှပါတယ်လေ….အော်….ဒီအချစ်လေ….။
In: ကဗျာ,ဦးပုည‎ Posted By: lovevirous7 Date: May 16, 2013
အော်.. .အချစ် အချစ်
Leave comment4Comments & 422 views
By: lovevirous7 at May 16, 2013
By: liyonardo at May 16, 2013
By: ei lay at May 17, 2013
တရွာတည်းသားတွေဘဲကွ မင်းဒိလောက်တော်မှန်းငါ မသိဘူး
By: shinelalin at May 17, 2013